यसकारण कम खाने मासु
डा. डिबी सुनुवार -प्राकृतिक चिकित्सक – शरीरको सन्तुलित पोषणका लागि २० प्रतिशत अम्लीय र ८० प्रतिशत क्षारीय पोषण तत्व आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शरीरको सन्तुलित पोषणका लागि खानामा बढीभन्दा बढी
मुटुलाई स्वस्थ राख्ने पाँच तरिका
दैनिक व्यायाम, सन्तुलीत खाना, मादक पदार्थबन्द गरेमा मुटु स्वस्थ रहन्छ । १ .फलफुल, हरियो तरकारी, गेडागुडी, काजु बदामधेरै खाने गर्नु पर्दछ। रिफायिन गरेको सेतो पाउरोटी, कुकिज, पाेट्याटाे क्रेकर्स, सोडा ,कोक,
मन कमजोर हुने अवस्थालाई डिप्रेसन भनिन्छ । मानसिकरोगका २ प्रकार– कडाखालको मानसिकरोग र सामान्यखालको मानसिकरोगमध्ये डिप्रेसनलाई सामान्यखाले मानसिकरोगमा लिइन्छ । डिप्रेसनपश्चात् मानिसको अधिकांश समय मनमा खिन्नता हुने गर्छ । मानिसलाई
यसकारण हुँदै छ पुरुष प्रजनन क्षमता ह्रास
विगत केही वर्षयता भएका विभिन्न अध्ययनअनुसार पुरुषमा शुक्रकीटको संख्या घट्दो छ र त्यसको गुणस्तरमा पनि ह्रास आइरहेको पाइन्छ । विशेषगरी, अव्यावहारिक र अस्वस्थ जीवनशैलीका कारण प्रजनन क्षमतामा कमी आइरहेको हो
गाँजा सेवनका फाइदाबारे अमेरिकी चिकित्सक
अमेरिकी चिकित्सक पिटर ग्रिनस्पुनले हारभर्ड विश्वविद्यालयको प्रकाशनमा गाँजा सेवनका फाइदाबारे उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकाका अधिकांश राज्यहरुमा मेडिकल प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग वैध मानिन्छ । एकसयवटा सकृय तत्वहरु पाइने गाँजामा
गर्भवती महिलालाई अण्डा र झण्डा
गर्भवती भएको थाहा पाएलतत्तै दुई महिला स्वास्थ्य सेविकाले सिन्धुपाल्चाेक भोटेकोसी गाउँपालिका लिस्तीकोट छ्यासिङकी सुकु विको घरमा हरियो झण्डा बाँधेर गए । गर्भवती भएदेखि बारम्बार महिला स्वास्थ्यकर्मीले खानपान र स्वास्थ्यमा घचघच्याइरहे
सफा दाँतले मानिसको व्यक्तित्व झल्काउँछ । सफा राख्न नसकेमा दाँत बलिया पनि हुँदैनन् । बलियो नहुँदा धेरै किसिमका समस्या देखा पर्न सक्छन् । हुन पनि आजभोलि विभिन्न कारणले बच्चादेखि वृद्धसम्म
फोक्सोमा क्यान्सर हुनुको कारण
प्राडा. नीरज बम छातीरोग विशेषज्ञ त्रिवि शिक्षण अस्पताल फोक्सोमा हुने श्वासनली र कोषिका असामान्य रूपमा बढ्नुलाई फोक्सोको क्यान्सर भनिन्छ । फोक्सोमा हुने क्यान्सर मुख्यतः दुई किसिमका हुन्छन्, स्मल सेल र
२४ घन्टामा तपाई हामी जम्मा ८ घन्टा सुत्छौ त्यही भएर यी कुराहरु बिचार गरौ
बर्तमान समयमा मानिषहरु आफ्नो दिनचर्याको जिबनमा यती धेरै नै ब्यस्त हुदछन की उनी हरुलाई आफ्नो खाना पीन आराम र स्वास्थ प्रती बेवास्था गरीरहेको देखदै आईरहेका छौ। सर्बेक्ष्ण अनुशार मानिषहरु २४
पटक–पटक पिसाब लाग्ने समस्या !
-पटक–पटक पिसाब लाग्ने समस्या छ भने बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यस्तो हुनुका कारण धेरै छन् । मूत्राशय (ब्लाडर) र मिर्गौलामा स्टोन हुँदा पनि असामान्य ढंगले पिसाब लाग्ने समस्या हुन्छ । – २४ घन्टामा